Maxaa ka jira in Canshuurta Dekedda laga Qaado dib loo siiyo Ganacsato Kale? – Balcad.com Teyteyleey
Maxaa ka jira in Canshuurta Dekedda laga Qaado dib loo siiyo Ganacsato Kale?
Sida ku cad warqadda hoos ku lifaaqan waxaa muuqata in aydowladdu dib u siido qayb kamid ah lacagta canshuurta ee kasoo xaroota dekedda rag ganacsato ah taas oo dadkii laga qaaday ay dacwad culus ka muujiyeen. Arrintaani waxay shaki galinaysaa ballanqaad kii dawladda cusub ee ahaa inay cirib jarayaan musuq iyo sixun wax u maamul ayna dakhliga dawladda ku bixin doonta halka ugu haboon.
Dabayaaqadii sanadkii 2016; ayaa waxaa soo shaac baxay khilaaf xooggan oo u dhexeeya ganacsatada gobolka Banaadir, Khilaafkaas ayaa sababay in ganacsatadu ku kala tagaan Rugtii ganacsiga, koox kastaana ay samaysato xafiis Rugta Ganacsiga oo iyaga ugaar ah. Khilaaf kaan ayaa sababay:
1. In doorashooyin aan laysku raacsanayn qoloba gooni u qabsato oo ay isku caleema saareen ganacsato kala aragti duwan.
2. In xafiisyo kala duwan ay kala furtaan, iyada oo qolo waliba sheeganeyso in uu yahay xafiiskeedu kan rasmiga ah ee Rugta ganacsiga.
3. In ganacsato ka badan boqollaal ay warqad dacwad ah u gudgudbiyaan xafiisyada u sarreeya Dawladda Soomaaliya, iyaga oo ka cabanaya in lacag ay canshuur u bixiyaan dib loo siiyo ganacsato kale oo uu hoggaamiyo MaxamuudGabayre. Waxayna ku doodeen inaysan xaq ahayn in canshuurta ay bixiyaan dib loo siiyo ganacsato kale, iyaga o osheegay in lacagtaasi gaar ikarto 400 ilaa 500 kun sanadwalba.
· Sida kuu cad warqadda taariikh 18-Febraury-2017; ee ka soo baxday xafiiska Hanti-dhowrka qaranka waxaa la joojiyey bixinta lacagtaas.
· Sida ku cad xaashida kale ee taariikhdeedu tahay 03-March-2017; kana soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda Maaliyadda waxa dib loo fasaxay in lacagtii casnhuurta ahayd dib loo siiyo rag ganacsato ah oo uu ka mid yahay Maxamuud Gabeyre.
Tani waxa ay dhalisay in ganacsatada canshuurtan bixiyaa ay shaku gelyaan caadyaalnimada madaxda xukuumadda qaarkood, taas oo u muuqato in ay ganacsatadu kula xiran yihiin xafiisyo kala aragti ah qudhoodu oo k awada tirsan xukuumadda Soomaaliya.
Arrinta ugu wayn ee la is waydiinayo ayaa ah canshuurta loogu yeeray ‘khidmadda’ sida ku cad warqadda wasaaradda maaliyaddu ay dib ugu celinayso qaar ka mid ah ganacsatada, ma waxa ay noqon doontaa mid joogto ah mise mid laga leeyahay dan gaar ah oo markii laga gaaro la joojiyo; maxaase loo sheegi doonaa ganacsatada iyo shacabka niyadda iyo yididiilada weyn u haya dowladda cusub in ay noqon doonto mid la dagaallanta musuqa, kuna shaqaysa caddaalad (transparency).
Canshuurta yare ee soo xarootana u maamaamusha siwaafaqsan nidaamka xalaasha ah oo ka madaxbannaan musuqmaasuq iyo nin jeclaysi.
The post Maxaa ka jira in Canshuurta Dekedda laga Qaado dib loo siiyo Ganacsato Kale? appeared first on Ilwareed Online.
Madaxweynaha Kenya oo la Afuray Muslimiinta Kenya sameeyeyna fal soo jiidasho leh